नेपालमा यौ न कर्मीको संख्या २७ हजार, कुन शहर मा कति ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ राजनीति/ रोचक/नेपालमा यौ न कर्मीको संख्या २७ हजार, कुन शहर मा कति ?
काठमाडौं । ग्लोबल फ न्डले हालै गरेको आईबीबीएस इन्टिग्रेटेड बायोलोजिकल एन्ड बिहेभियरल सर्भिलेन्स सर्वेक्षणले नेपालमा २७ हजार यौ नक र्मी महिला रहेको देखाएको छ, तर त्यसको दुई गुना बढी महिला यौ न व्य वसायमा रहेको यौ नक र्मी महिलाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था जागृति महिला महासंघको दाबी छ । पु रुष यौ नक र्मीको संख्या पनि त्योभन्दा बढी रहेको महासंघको अनुमान छ । यौ न व्यवसायीहरूको क्षेत्रमा कार्यरत महिला अगुवाहरूका अनुसार नेपालमा पाँच प्रकारका यौ नक र्मी छन् ।
पहिलो श्रेणीका यौ नक र्मी जो महँगा गाडी चढ्छन् र बाहिर कमै मात्र देखिन्छन् । उनीहरूका पार्टनर पनि उच्च ओहदाकै हुन्छन् । दोस्रो श्रेणीका यौ न व्यवसायी जो सम्प र्कका आधारमा मात्र व्यवसाय गर्छन् । उनीहरू ठू ल्ठूला होटलको स म्पर्कमा हुन्छन् । उनीहरू थोरै समयमा मनग्य कमाउँछन् । उनीहरूको कमाइ महिनामा एक लाखदेखि डेढ लाख आसपास हुन्छ ।
तेस्रो प्रकारका यौ न व्यवसायी जो डान्स बार तथा गेस्ट हाउसलाई आफ्नो सम्प र्क स्थान बनाएर व्यवसाय गर्छन्, उनीहरू मोबाइलमार्फत ग्राहकसँग सम्पर्क गरेर बोलाएको स्थानमा पुग्छन् वा आफूले बोलाउँछन् । उनीहरूको कमाइ महिनामा ५० हजारदेखि १ लाखको आसपासमा हुन्छ । चौथो प्रकारका यौ न व्यवसायी ग्राहक फेर्दै र खोज्दै हिँड्दैनन् ।
उनीहरू का नियमित ग्राहक हुन्छन् । उनीहरू तिनैबाट आफ्ना सबैजसो आवश्यकता पूर्ति गर्छन् । घर–व्यवहार चलाउन पुग्ने आम्दानी गर्ने पाँचौं किसिमका यौ नक र्मी हरू उमेर ढल्कँदै गएका हुन्छन् । उनीहरू थोरै पैसाका लागि पनि यौ न बेच्न तयार हुन्छन् ।
काठमाडौं लगायत नेपालका प्रमुख सहरहरू धरान,विराटनगर,नारायणघाट, पोखरा, नेपालगन्ज, बुटवल, धनगढी, वीरगन्ज आदि सहरमा यौ न व्यवसाय फस्टाउँदो छ । एक यौ न व्यवसायीका अनुसार यी सबै ठाउँंमा गरेर महिनामा करिब ५० करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार हुन्छ । निजामती सेवादेखि प्रहरी, सुरक्षा निकाय, राजनीतिज्ञ, सवारी चालक, व्यापारी, उद्योगी यी सबै यौ नक र्मीका ग्राहक हुन् ।
नेपालमा हुने यौ न व्यवसायमा हुने करोडौं आम्दानी आखिर कहाँ खर्च भैरहेको छ त यौ नक र्मी महिला वा पुरुषले कमाउने करोडौं रुपैयाँ कहाँ लगानी गरिरहेका छन् उनीहरू मोज मस्तीमै उडाइरहेका छन् ? कि उत्पादन मूलक काममा खर्च गरिरहेका छन् रु यी प्रश्न को उत्तर सहज छैन ।
यौ नक र्मी महिलाका क्षेत्रमा कार्यरत जागृति महिला महासंघकी कार्यक्रम निर्देशक विजया ढकालका अनुसार अधिकांश यौ नक र्मी महिलाको आम्दानी फजुल खर्च भैरहेको छैन । उनीहरूको आम्दानी बालबालिकाको पढाइ तथा परिवारको लालनपालनमा खर्च हुने गरेको छ । त्यसबाट बचेको केही रकममात्र उनीहरूले भविष्यका लागि बचत गर्ने गरेका छन् । यसका अतिरिक्त घरपरिवार, आमाबुबाको पालनपोषण, औषधि–उपचारमा पनि उनीहरूको कमाइ खर्च हुने गरेको छ ।
पछिल्ला दिनमा कलेज पढ्दा पढ्दै यो व्यवसाय अँगाल्ने युवतीहरूको संख्या बढ्दै गएको विजया बताउँछिन् । सहरमा हाइफाई जीवनशैली जिउन चाहने तर घरबाट बुबाआमाले पढाइका लागि पठाएको सीमित खर्चले पुग्ने अवस्था नभएपछि उनीहरू यो व्यवसायमा आएको पाइएको उनको बुझाइ छ ।
राजधानीमा रोजगारी पाउन मुस्किल हुने र पाइहाले पनि न्यूनतम तलबले महिनाको खर्च टार्न धौधौ हुने भएकाले सजिलै धेरै पैसा कमाउने पेसाका रूपमा उनीहरूले यो व्यवसाय सुरु गरेको पाइन्छ । बसपार्कलाई कार्यथलो बनाइरहेकी एक अधबंैसे यौ नक र्मीले भनिन्— समाजले हामीलाई नकारात्मक दृष्टिले मात्र हेर्छ । कहिल्यै हाम्रो विवशता बुझ्ने प्रयास गर्दैन । उनीहरूले आफूले कमाएको सबै परिवारमा लगानी गरेको हुन्छ ।
उनका अनुसार यौ नक र्मी महिलाले आफूले कमाएको पैसा फजुल खर्च गर्दैनन् । सौन्दर्य प्रसाधनका सामान किन्नु परे ग्राहकलाई किन्न लगाउँछन् । मीठो खान मन लागे उनीहरूलाई नै किन्न लगाउँछन् । आफूले कमाएको पैसा फजुल खर्च गर्ने एकदमै कम हुन्छन् । कसै–कसैले यही व्यवसायबाट काठमाडौंमा घर र गाडी पनि जोडेको उनी सुनाउँछिन् ।
बिचौलियाका कारण पहिले उनीहरूको आम्दानी कम हुन्थ्यो, अर्थात् आधा–आधा गर्नुपथ्र्यो, तर अहिले मोबाइल तथा इन्टरनेटको सहयोगले सीधै ग्राहकसम्म पहुँच पुगेको छ । पढेलेखेकाले त अहिले ग्राहकसँग विदेशबाट गिफ्टसमेत मगाउँछन् । धेरैजसो यौ नक र्मीले आफ्ना बालबच्चा सामु आफ्नो पेसा लुकाउँछन् । उनीहरूलाई राम्रो स्कुल, कलेज पढाइरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो अनुहार उनीहरूमा देखिरहेका हुन्छन्, तर बूढेसकालमा कसैगरी त्यो कुरा छोराछोरीले थाहा पाएपछि उनीहरूले त्यो विवशता बुझ्दैनन् । सीधै हेंला गर्छन् ।
दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा सञ्जाल भएको जागृति महिला महासंघकी कार्यक्रम अधिकृत शान्ति तिवारी यौ नकर्मी लाई हेर्ने समाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसकेकाले उनीहरूले नागरिकको हैसियतले पाउनुपर्ने शिक्षा एवं स्वास्थ्यको अधिकारबाट समेत वञ्चित भैरहेको बताइन् । तिवारी भन्छिन्– उनीहरू पनि यो देशका नागरिक हुन् ।
उनीहरूलाई पनि शिक्षा एवं स्वास्थ्यको अधिकार छ तर यी सबै सहजै उपलब्ध हुने अवस्था छैन । अधिकांश यौ न व्यवासायी आफ्नो पेसा परिवर्तन गर्न चाहन्छन् तर उनीहरूका सामुन्ने विकल्प पनि छैन । शान्ति भन्छिन्— सानोतिनो सिलाइ, बुनाइ, कटाइको तामिल लिएर गरिने व्यवसायबाट हातमुखसमेत जोर्न सकिँदैन, अनि उनीहरू त्यही पेसामा फर्कन बाध्य हुन्छन् ।
उनी जुसुकै विषयको प्रवचन दिनमात्र होइन् नाच्न पनि सिपालु छन भन्ने कुरा बुधबार राति नै सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक भएको भिडियोमा उनी ह्याप्पी मुद्रामा मन लगाएर नै नोचेको देखिन्छ। राजनीतिबाहिर व्यक्तिगत जीवनमा ठट्यौलो र रसिक रहेका उनी पार्टीका कार्यकर्ताहरु माझ यस्तै अवतारमा पेश भए। बालकोटस्थित उनकै निवासमा पत्नी राधिकालाई जन्मदिनको शुभकामना दिन पुगेका युवा, विद्यार्थी नेता तथा पार्टीका कार्यकर्ताका माझ उनी रसिक रुपमा प्रस्तुत भएका हुन्